Muuse Biixi oo Laga Reebay Kulankii Boqorka Sucuudigu Ku Qaabilayey Madaxdii Xajka Ku Sugnayd | Baligubadlemedia.com
Muuse Biixi oo Laga Reebay Kulankii Boqorka Sucuudigu Ku Qaabilayey Madaxdii Xajka Ku Sugnayd
Madaxweynaha somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo ka mid ah hogaamiyeyaasha wadamada Islaamka ee sanadkan gudanaya waajibaadka ayaan ilaa hada wax kulan ah la qaadan boqorka dalka Sucuudiga oo qaabilay inta badan madaxda xajka gudanaysa.
Wararka ayaa xaqiijiyey inaanu madaxweynaha somaliland qayb ka noqon kulamo dhawr ah oo boqor Salmaan Binu Cabdulcasiis la yeeshay madaxda wadamada islaamka ee gudanaysay waajibaadka xajka, kuwaas oo ilaa haatan qaar ka mid ahi hadheen.
Sidoo kale xubno dublamaasiyiin ah oo ku sugan wadanka Sucuudiga ayaacadeeyay inaanu jirin kulan uu madaxweyne Muuse Biixi qayb ka ahaa oo boqorka Sucuudigu la yeeshay madaxda wadamada islaamka ee gudanaysa xajka, waxaanay intaas raaciyeen in kulamada oo isdaba joog ah dartood ay dhici karto in madaxweynaha somaliland kulamada hadhay ka soo muuqdo.
Dhinaca kale wararsoo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha somaliland laga reebay martiqaad uu fidiyey boqorka dalka Sucuudigu, kaas oo uu la yeeshay madaxdii gudanaysay waajibaadka xajka ee ka kala timid dalalka Islaamka, kulankaas oo uu hore uga qayb galay madaxweyne ku xigeenka somaliland wakhti uu gudanayey waajibaadka xajka.
Ilaa hada ma jiro war ka soo baxay xukuumada somaliland oo la xidhiidha kulamo uu madaxweyne Muuse Biixi la yeeshay boqorka dalka Sucuudiga ama qaar qorshaysan oo la filayo inuu la qaato.
Dhinaca kale xukuumada dalka Sucuudiga ayaa shaacisay in kulamada uu boqorka Sucuudigu la qaadanayo madaxda gudanaysa waajibaadka xajka aan lagaga hadli doonin wax siyaasad ah isla markaana uu ahaan doono oo kaliya mid ku saabsan gudashada xajka.